Wetland: kedu ihe ha bụ, ụdị, ecology na mkpa | Green Renewables
Portillo nke German | 05/11/2021 10:00 | Gburugburu
Otu n'ime ihe ndị sitere n'okike na-emetụta ihe dị iche iche dị ndụ dị iche iche, bụ ala mmiri. Ebumnuche a na-eme kwa afọ bụ ime ka ndị mmadụ mara mkpa ọ dị ichebe gburugburu ebe obibi ndị a dị oke ọnụ ahịa. Ya mere, February 2 nke afọ ọ bụla bụ World Wetland Day. Ala mmiri mmiri bụ ihe gburugburu ebe obibi nke ala na-adịgide adịgide ma ọ bụ na-emikpu site na mmiri mgbe ụfọdụ. Nke a nwere ike ime na gburugburu ebe obibi mmiri dị ọcha yana mpaghara ụfọdụ nwere salinity.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ala mmiri, àgwà ha na mkpa ha dị.
1 Ala Wetland
Ọ bụ gburugburu ebe obibi nwere nguzozi gburugburu ebe obibi, dabere na ala idei mmiri na-ejupụta ugboro ugboro ma ọ bụ na-adịgide adịgide. Ebe obibi ndị a nwere ike ịpụta n'ebe enwere mmiri ọhụrụ ma ọ bụ nnu. N'ihi njirimara ndị a, ala mmiri nwere ike ịnọgide na-enwe nnukwu ụdị dị iche iche. na-enye akụ na ụba sitere n'okike ihe ụdị ndụ dị iche iche na-enweghị atụ.
Ụbọchị Wetland World na-emesi ike mkpa ala mmiri dị n'ihi na ha dị mkpa maka ibi ndụ anyị na-adịgide adịgide n'ọdịnihu. Ala mmiri mmiri nwere ike ịbụ eke ma ọ bụ nke mmadụ mere. Ụfọdụ ụdị ala mmiri dị n'okike nwere ike gbasaa n'ime apiti, ụfọdụ swamps na mpaghara mmiri ha, ala ahịhịa, wdg. N'aka nke ọzọ, anyị nwere ike Hụ ala mmiri ejiri aka arụpụtara ma ọ bụ gbanwee. Ọ bụrụhaala na ọnọdụ gburugburu ebe obibi na-ekwe, ha nwere ike iji aka aka jide mmiri ruo nwa oge na na-adịgide adịgide.
N'ihi na ala mmiri ndị a bara ụba nke ukwuu, ha aghọwo ngwá ọrụ dị mkpa maka ichekwa ọdịdị. E nwere ụdị ala mmiri dị iche iche, a na-ekewakwa ha dịka ụdị mmiri nke na-eme ka ha dị na àgwà ndị ọzọ anyị ga-agbaso. Isi ihe dị iche n'etiti ụdị mmiri mmiri bụ ụdị mmiri. Anyị na-achọpụta ala mmiri dị ọcha na ala mmiri nnu. Anyị nwekwara ike ịmata ọdịiche dị n'etiti ala mmiri dị n'okike na ala mmiri nke mmadụ mere.
Ala mmiri ozuzo: Ọ bụ ala mmiri nwere àgwà okike na ụdị mmiri dị ọcha. Ha na-abụkarị osimiri, iyi, na nsụda mmiri.
Ọdọ mmiri mmiri: A na-etolite ha site na ọdọ mmiri na ụfọdụ ọdọ mmiri mmiri dị ọcha.
Osimiri Tropical: Gụnyere mpaghara nwere obere isi iyi, oases, ọzara idei mmiri, ọhịa apiti, apiti, na ahịhịa. Isi njirimara nke ụdị ala mmiri a bụ na ha niile nwere ihe okike na mmiri dị ọhụrụ.
Usoro gburugburu ebe obibi anyị kwuru n'elu ga-enwerịrị ụdị ọnọdụ na njirimara ole na ole maka ntọala ha dị ka ala mmiri. Ndị a bụ njirimara ndị bụ isi:
Ala mmiri mmiri bụ mpaghara mgbanwe ndị ahụ na-enwe mgbanwe nwayọọ nwayọọ n'etiti ihe ndị dị ndụ na mmiri na terrestrial. Enwere ike ịsị na a na-ewere ha dị ka ihe ndị dị ndụ na-agwakọta ebe ọ bụ na ha na-echekwa njirimara nke abụọ ahụ. Na mgbakwunye na nke a, enwere ike ịchọpụta na akụkụ ụfọdụ na-elekwasị anya na gburugburu ebe obibi nke ụwa ebe akụkụ ndị ọzọ nke ụwa. ala mmiri mmiri nwere ihe e ji mara ihe ndị dị n'ime mmiri. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-ahụ mpaghara idei mmiri bụ nke a na-ahụkarị na gburugburu ebe obibi nke mmiri ma nwee ike ịdịru nwa oge na nke na-adịgide adịgide. Ha na-apụtakarị nwa oge n'ebe ndị nwere obere ịda mbà n'obi ma dị mfe idei mmiri mgbe mmiri na-ezo.
Mmiri nke ala mmiri ga-abụrịrị mmiri na-adịghị ahụkebe ebe ọ bụ na ha enweghị ike ịnwe oke mmiri. Ha nwere ike ịnwe naanị obere mmiri ma bụrụ nke mmiri ọhụrụ ma ọ bụ nnu nwere mejupụtara. Ha nwekwara ike ịgụnye obere mpaghara oke osimiri nwere omimi ụfọdụ. Ọtụtụ mgbe, mmetụta tidal na-adịkarịghị adị elu. Ihe kachasị mma bụ na mmetụta adịghị agafe mita 6 nke ọdịiche.
A na-ekpebi oke ala ala mmiri site n'ụdị ahịhịa dị na mpaghara ọ bụla. Osisi kachasị ewu ewu bụ hydrophilic. Nke a pụtara na ha na-eto ma na-eto nke ọma na mmiri. Enwere ike ịmata ọdịiche dị n'etiti ahịhịa ndụ na-anọchi anya oke ala mmiri na-abụghị nke hydrophilic. Ọ bụ ebe a ka otu gburugburu ebe obibi na-agwụ, nke ọzọ na-amalite site na njirimara zuru oke nke gburugburu ebe obibi nke ụwa.
Ala mmiri mmiri bụ ebe obibi dị mma maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụdị dị iche iche. Nnụnụ ndị na-akwaga mba ọzọ na-achịkarị ebe ha nwere ike inye nri na izu ike n'ala mmiri dị na gburugburu ụwa. Ha na-ejekwa ozi na-ehi ụra ma na-eto eto. N'aka nke ọzọ, ị nwekwara ike ịhụ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke osisi na anụmanụ dị ka mammals, amphibians, anụ ufe, azụ na ụmụ ahụhụ.
Ala mmiri mmiri bụ gburugburu ebe obibi echekwara maka ihe kpatara ya. Ma ọ bụ na ha na-arụ ọrụ dị mkpa maka ịrụ ọrụ nkịtị nke okike. Ha nwere ike iburu nnukwu ihe dị iche iche dị ndụ na osisi na-adabere na mmiri na-etolite. Na mgbakwunye, ị ga-agbakwunye uru mmadụ. Ala mmiri nwere ike ịmepụta ebe a na-emepụta nri na-achọ nnukwu mmiri iji na-akọ ihe dịka osikapa.
Ihe ndị ọzọ dị ezigbo mkpa iji nwee ike idowe iru mmiri ka ọ dị. iwu nke usoro mmiri mmiri gụnyere elu na aquifers. Ala mmiri mmiri na-arụsi ọrụ ike n'ịchịkwa oke mbuze nke ala na ịhazi usoro nri nri. Ihe ndị a bụ isi ihe kpatara ọtụtụ ala mmiri nwere usoro nchebe a na-ewere dị ka ebe nchekwa ihe okike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Ala Wetland